Madaxweynaha Somaliland iyo Wakiilka QM ee Arrimaha Somalia oo ku kulmay Hargeysa – Puntland Post
Madaxweynaha Somaliland iyo Wakiilka QM ee Arrimaha Somalia oo ku kulmay Hargeysa
Hargeysa (PP) ─ Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay ergayga Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somalia, Danjire Michael Keating oo safar shaqo ku jooga Somaliland.
Eargayga Qaramada Midoobay ee Somalia, Danjire Michael Keating oo isna hadlay, ayaa si qoto dheer u sharraxay waxyaabaha ay sida gaarka ah uga wadahadleen Madaxweynaha Somaliland iyo ujeeddada booqashadiisan uu ku tagay Somaliland, isagoo sheegay inay isku af-garteen wixii ay kawada hadleen oo dhan.
“Halkaan waxaanu u nimid inaan kulan la Qaadanno Madaxweynaha cusub ee Somaliland, waxaanan kulan uga hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin; Xukuumadda cusub iyo hawlaheeda iyo sidii aan reer Somaliland ugu hambalyeyn lahaa Madaxweynaha cusub ee ay doorteen sannadkii hore, isla markaana aan muhiimad gaar ah siinno qorsheyaasha xukuumadda cusub, sida ammaanka, ka-hor-tagga abaaraha, shaqo-abuurka da’yarta, Xoojinta Caafimaadka iyo Waxbarashada. Madaxweynahana waxaan u sheegay inay Qaramada Midoobay diyaar ula tahay sidii ay Somaliland uga taageeri lahayd wixii caqabado ah ee jira.”
Ugu dambeyn, boqashada danjire Keating uu ku tagay Somaliland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Somaliland ay dooratay madaxweyne cusub, Sidoo kalena dhawaan lasoo wareejiyay hawada Somalia oo ay Somaliland si aad ah uga fal-celisay.